SEUKI 2016: Tartankii oo lasoo afjaray & kooxda Örebro oo koobka hanatay + Sawirro xul ah – Gool FM
(Stockholm) 03 Agoosto 2016 – Waxaa magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden lagusoo abyey tartanka Seuki 2016 ee xagaaga loo dhigo Soomaalida qurbaha.
Tartankan oo ay kasoo qayb galeen 13 kooxood oo ka kala yimi dalalka Sweden, Denmark, Norway, Finland, UK, Holland iyo Austria ayaa waxaa dhamaadka iskugusoo haray kooxaha Som United vs Örebro.
Waxaana ciyaartii final-ka oo aad u qurux badnayd isla markaana ay kasoo qayb galeen dadwaynihii ugu badnaa 2-0 libtii ku hanatay kooxda Örebro oo guusha u qalantey waxaana koobkii faraha ka saaray guddoomiya Seuki ee Kayse Cabdi.
ABAAL MARRINADII LA BIXIYEY:
Waxaa sidoo kale la bixiyey jaa’isooyin kala geddisanaa, waxaa kooxdii ugu wanaagsanayd noqotay Dahabshiil Norway, goolwalihii ugu fiicnaa waxaa qaatay qabtaha Örebro, daafaca ugu fiican waa Zaki Cabdi, weeraryahankii ugu wanaagsanaa Axmed Barre, laacibkii ugu da’da yaraa Cabdi Jaabir Maxamed oo Som United ah, macallinka ugu wanaagsan waxaa la guddoonsiiyey Maxamed Cabdul Qaadir oo Som United ah iyo xitaa guddoonka Seuki ee sanadkan Kayse Cabdi Cadde.
Waxaa kale oo abaalmarrinno la siiyey fanaaniintii dadka madadaalinaysey sida Deeqa Afro, Guuleed, Weli Rasto, Yaxye UK, Cabdi Fitaax Yare, Cali Yalaxoow, sawirqaadayaasha Abooke Cadde iyo Bashka Boondheere.
Waxaa sidoo kale abaalmarin billad ah la guddoonsiiyey Gool FM.net oo uu tartankan ka joogey Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah tifaftiraha webka Gool FM.net.
Harry Kane iyo Dele Alli oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Tottenham, diyaarna u ah kulanka Inter Milan... (SAWIRRO)